OneNote ၊ Keep နဲ့ Evernote တွေထဲမှာ ဘယ် Notes App က အကောင်းဆုံးလဲ?
6 Apr 2018 . 10:30 AM
ဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပျူတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Notes တွေကို အမြဲမှတ်နေကြရပါတယ်။ ဖုန်းမှာပါတဲ့ Notes App တွေထက် ပိုကောင်းပြီး တခြားဘယ် Mobile Devices ဒါမှမဟုတ် Computer မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် Account Sign In ဝင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်မှတ်ထားတဲ့ Notes တွေအကုန်လုံးကို မြင်နိုင်တဲ့အပြင် အခြား Features, Functions တွေလည်း အများကြီးပါဝင်တဲ့ Notes App ၃ ခုရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ Microsoft OneNote, Google Keep နဲ့ Evernote ပါ။ အခု Article မှာတော့ ဘယ် App က အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ Notes app တွေမှာ နာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့ Evernote နဲ့ OneNote က Windows ၊ Mac ၊ iOS ၊ Android အကုန်လုံးမှာ ရရှိနိုင်ပြီးတော့ Google Keep ကတော့ Android, iOS မှာပဲ App အနေနဲ့ပဲရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Mac ၊ Windows (သို့) အခြား Devices တွေကနေသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keep.google.com ကနေ ဝင်သုံးရမှာပါ။
Mobile Version Usage
Mobile Phone App အနေနဲ့ အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာတော့ Evernote နဲ့ Keep ကို OneNote က သိပ်မလိုက်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Features အစုံအလင်ဆုံး နဲ့ အသုံးပြုရအလွယ်ကူဆုံးကတော့ Evernote ဖြစ်ပြီး Notebooks တွေသီးခြားထားနိုင်တာ၊ Google Account, Link In Account တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်တာ၊ Font size နဲ့အခြား စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တာ၊ Audio Note, Handwriting, Attachment, Reminder, Document Camera စတဲ့ Features တွေစုံလင်စွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Evernote app မှာ Notes တွေကို လွယ်ကူစွာ Share နိုင်ပြီး Evernote အတူအသုံးပြုသူအချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် Work Chat Function လဲပါဝင်ပါတယ်။ အကြိုက်တွေ့မိတာကတော့ Evernote မှာ Free Basic Plan, Evernote Plus, Evernote Premium Plan ဆိုပြီးခွဲထားပေမယ့် သာမန်အသုံးပြုမှုတွေအတွက် Free Plan ကလုံလောက်တဲ့အပြင် ကြော်ငြာမပါဝင်ခြင်း၊ Passcode Lock လို Features တွေကိုပါ Basic Plan မှာပဲ အသုံးပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Google Keep ကတော့ Features စုံလင်တာထက် အသုံးပြုရတာ ရိုးရှင်းပြီး အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ Note App တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။ အခြေခံ Functions တွေဖြစ်တဲ့ Notes, List, Handwriting, Audio Note, Camera တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Notes တွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေရာမှာ အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ Interface တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ Notes တွေကို Labels တပ်ပြီး ခွဲခြားထားနိုင်ပြီး Archive Folder ထဲလည်းထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ Note Sharing အလွန်လွယ်ကူပြီး အခြား Google Keep သုံးနေတဲ့သူရဲ့ Gmail address ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ အသုံးပြုရတာပိုပြီးမြန်ဆန်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက် Font မရွေးချယ်နိုင်သလို စာလုံးအရွယ်အစား စတဲ့ Font Formatting လည်းပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
OneNote ကတော့ Desktop Version ကိုဦးစားပေးထုတ်ထားတဲ့အတွက် အချို့သော Features အတော်များများ Mobile Version မှာပါဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Evernote လောက် Features မများသလို Google Keep လောက်လဲ မပေါ့ပါး မလျှင်မြန်တဲ့အတွက် သာမန် Note app ထက်အနည်းငယ်ပိုတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။
PC Version Usage
PC Version မှာတော့ Microsoft OneNote ထက်သာလွန်တဲ့ Note Taking app မရှိဘူးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ Microsoft Word ကို အသုံးပြုတတ်တဲ့သူတိုင်း ရင်းနှီးမယ့် Interface နဲ့ အချို့သော Microsoft Surface Pro လို Touch Screen PC တွေအတွက် Drawing Tools မျိုးစုံကို ရွေးချယ်နိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Audio Recording, Video Recording တွေပါ ပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် Excel Spreadsheet တွေပါထည့်သွင်းနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Version မှာ သုံးရအဆင်မပြေတဲ့ OneNote က PC Version မှာတော့ အကောင်းဆုံး Note App ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် Evernote app ကလည်း PC Version မှာ Features စုံလင်တဲ့ Note app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Version မှာ ပါဝင်တဲ့ Features တွေအကုန်ပါဝင်သလို Font ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တာ၊ Presentation Mode ပါဝင်လာတာ စတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ Features တွေပါ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် User Interface က OneNote နဲ့ ယှဉ်ရင်ဒိတ်အောက်နေမိလို့ ခံစားမိစေပါတယ်။
Google Keep ကတော့ ယခင်တုန်းက Chrome App တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရပေမယ့်လည်း အခုအချိန်မှာတော့ Google Chrome Web Store မှာ Apps တွေကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက် www.keep.google.com ကနေပဲ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Devices တွေအများအပြားမှာ အသုံးပြုတဲ့အခါ Device တစ်ခုမှာ ရေးထားတဲ့ Note တစ်ခုကို နောက်ထပ် Device တစ်ခုကနေ ချက်ခြင်းဖတ်နိုင်တဲ့ Synchronization နေရာမှာတော့ Google Keep က အမြန်ဆုံးပါ။ Font Formatting မရှိတာရယ် မြန်ဆန်ဖို့ကို အဓိကထားထားတဲ့ Interface ကြောင့် အခြား OneNote, Evernote တို့နဲ့ယှဉ်ရင် ၃၊ ၄ ဆ မက ကို ပိုပြီးမြန်မြန် Sync လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Microsoft OneNote က Microsoft Account နဲ့ Sign In ဝင်ထားရင် ပိုအဆင်ပြေပြီးတော့ Evernote ကတော့ Gmail ကနေတစ်ဆင့် Account သီးသန့်ဖွင့်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် Google ကနေ တန်းဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Google Keep ကတော့ ဖုန်းထဲမှာ (သို့) Chrome Browser မှာ Google Account Sign In ဝင်ထားရုံနဲ့ တစ်ခါတည်း တန်းသုံးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာလည်း အသာရတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
အခုဒီ Microsoft OneNote, Google Keep နဲ့ Evernote ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် Microsoft OneNote ဟာ Mobile မှာသုံးတာထက် ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးများသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး Notes App လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အလားတူ Evernote ကလည်း PC Version ထက် Mobile Notes App တွေမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Google Keep ကတော့ Features စုံလင်ဖို့ထက် အံ့အားသင့်ဖွယ် Sync လုပ်နိုင်တဲ့ အမြန်နှုန်းကြောင့် သာမန် Notes တွေကို ဖုန်းမှာရော၊ ကွန်ပျူတာမှာရော အမြဲသုံးနေရတဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး Notes App တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ရင်းနဲ့ ဒီ Article ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
ဖုနျးမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ ကှနျပြူတာမှာပဲဖွဈဖွဈ Notes တှကေို အမွဲမှတျနကွေရပါတယျ။ ဖုနျးမှာပါတဲ့ Notes App တှထေကျ ပိုကောငျးပွီး တခွားဘယျ Mobile Devices ဒါမှမဟုတျ Computer မှာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ Account Sign In ဝငျလိုကျတာနဲ့ ကိုယျမှတျထားတဲ့ Notes တှအေကုနျလုံးကို မွငျနိုငျတဲ့အပွငျ အခွား Features, Functions တှလေညျး အမြားကွီးပါဝငျတဲ့ Notes App ၃ ခုရှိပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ Microsoft OneNote, Google Keep နဲ့ Evernote ပါ။ အခု Article မှာတော့ ဘယျ App က အကောငျးဆုံးလဲဆိုတာကို ဝဖေနျဆနျးစဈပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီနရောမှာတော့ Notes app တှမှော နာမညျကွီးဖွဈတဲ့ Evernote နဲ့ OneNote က Windows ၊ Mac ၊ iOS ၊ Android အကုနျလုံးမှာ ရရှိနိုငျပွီးတော့ Google Keep ကတော့ Android, iOS မှာပဲ App အနနေဲ့ပဲရရှိနိုငျမှာဖွဈပွီး Mac ၊ Windows (သို့) အခွား Devices တှကေနသေုံးခငျြတယျဆိုရငျတော့ keep.google.com ကနေ ဝငျသုံးရမှာပါ။
Mobile Phone App အနနေဲ့ အသုံးပွုတဲ့အခြိနျမှာတော့ Evernote နဲ့ Keep ကို OneNote က သိပျမလိုကျနိုငျတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ Features အစုံအလငျဆုံး နဲ့ အသုံးပွုရအလှယျကူဆုံးကတော့ Evernote ဖွဈပွီး Notebooks တှသေီးခွားထားနိုငျတာ၊ Google Account, Link In Account တှနေဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျတာ၊ Font size နဲ့အခွား စိတျကွိုကျပွငျဆငျနိုငျတာ၊ Audio Note, Handwriting, Attachment, Reminder, Document Camera စတဲ့ Features တှစေုံလငျစှာပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Evernote app မှာ Notes တှကေို လှယျကူစှာ Share နိုငျပွီး Evernote အတူအသုံးပွုသူအခငျြးခငျြး ဆကျသှယျနိုငျမယျ့ Work Chat Function လဲပါဝငျပါတယျ။ အကွိုကျတှမေိ့တာကတော့ Evernote မှာ Free Basic Plan, Evernote Plus, Evernote Premium Plan ဆိုပွီးခှဲထားပမေယျ့ သာမနျအသုံးပွုမှုတှအေတှကျ Free Plan ကလုံလောကျတဲ့အပွငျ ကွျောငွာမပါဝငျခွငျး၊ Passcode Lock လို Features တှကေိုပါ Basic Plan မှာပဲ အသုံးပွုနိုငျတာပဲဖွဈပါတယျ။
Google Keep ကတော့ Features စုံလငျတာထကျ အသုံးပွုရတာ ရိုးရှငျးပွီး အလှနျမွနျဆနျတဲ့ Note App တဈခုအဖွဈသတျမှတျနိုငျမှာပါ။ အခွခေံ Functions တှဖွေဈတဲ့ Notes, List, Handwriting, Audio Note, Camera တို့ပါဝငျမှာဖွဈပွီးတော့ Notes တှကေို ပွနျလညျရှာဖှရောမှာ အလှနျမွနျဆနျတဲ့ Interface တဈခုပါရှိပါတယျ။ Notes တှကေို Labels တပျပွီး ခှဲခွားထားနိုငျပွီး Archive Folder ထဲလညျးထညျ့ထားနိုငျပါတယျ။ Note Sharing အလှနျလှယျကူပွီး အခွား Google Keep သုံးနတေဲ့သူရဲ့ Gmail address ထညျ့လိုကျရုံပါပဲ။ အသုံးပွုရတာပိုပွီးမွနျဆနျအောငျလုပျထားတဲ့အတှကျ Font မရှေးခယျြနိုငျသလို စာလုံးအရှယျအစား စတဲ့ Font Formatting လညျးပါဝငျမှာမဟုတျပါဘူး။
OneNote ကတော့ Desktop Version ကိုဦးစားပေးထုတျထားတဲ့အတှကျ အခြို့သော Features အတျောမြားမြား Mobile Version မှာပါဝငျလာမှာမဟုတျပါဘူး။ Evernote လောကျ Features မမြားသလို Google Keep လောကျလဲ မပေါ့ပါး မလြှငျမွနျတဲ့အတှကျ သာမနျ Note app ထကျအနညျးငယျပိုတယျလို့ပဲ သတျမှတျနိုငျမှာပါ။
PC Version မှာတော့ Microsoft OneNote ထကျသာလှနျတဲ့ Note Taking app မရှိဘူးလို့တောငျပွောလို့ရပါတယျ။ Microsoft Word ကို အသုံးပွုတတျတဲ့သူတိုငျး ရငျးနှီးမယျ့ Interface နဲ့ အခြို့သော Microsoft Surface Pro လို Touch Screen PC တှအေတှကျ Drawing Tools မြိုးစုံကို ရှေးခယျြနိုငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။ Audio Recording, Video Recording တှပေါ ပါဝငျမှာဖွဈတဲ့အပွငျ Excel Spreadsheet တှပေါထညျ့သှငျးနိုငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။ Mobile Version မှာ သုံးရအဆငျမပွတေဲ့ OneNote က PC Version မှာတော့ အကောငျးဆုံး Note App ဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျ Evernote app ကလညျး PC Version မှာ Features စုံလငျတဲ့ Note app တဈခုဖွဈပါတယျ။ Mobile Version မှာ ပါဝငျတဲ့ Features တှအေကုနျပါဝငျသလို Font ကို စိတျကွိုကျရှေးခယျြနိုငျတာ၊ Presentation Mode ပါဝငျလာတာ စတဲ့ အသုံးဝငျတဲ့ Features တှပေါ ပါဝငျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ User Interface က OneNote နဲ့ ယှဉျရငျဒိတျအောကျနမေိလို့ ခံစားမိစပေါတယျ။
Google Keep ကတော့ ယခငျတုနျးက Chrome App တဈခုအနနေဲ့ အသုံးပွုလို့ရပမေယျ့လညျး အခုအခြိနျမှာတော့ Google Chrome Web Store မှာ Apps တှကေို ဖယျရှားလိုကျတဲ့အတှကျ www.keep.google.com ကနပေဲ အသုံးပွုရမှာဖွဈပါတယျ။
Devices တှအေမြားအပွားမှာ အသုံးပွုတဲ့အခါ Device တဈခုမှာ ရေးထားတဲ့ Note တဈခုကို နောကျထပျ Device တဈခုကနေ ခကျြခွငျးဖတျနိုငျတဲ့ Synchronization နရောမှာတော့ Google Keep က အမွနျဆုံးပါ။ Font Formatting မရှိတာရယျ မွနျဆနျဖို့ကို အဓိကထားထားတဲ့ Interface ကွောငျ့ အခွား OneNote, Evernote တို့နဲ့ယှဉျရငျ ၃၊ ၄ ဆ မက ကို ပိုပွီးမွနျမွနျ Sync လုပျနိုငျတဲ့အတှကျ အကောငျးဆုံးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
Microsoft OneNote က Microsoft Account နဲ့ Sign In ဝငျထားရငျ ပိုအဆငျပွပွေီးတော့ Evernote ကတော့ Gmail ကနတေဈဆငျ့ Account သီးသနျ့ဖှငျ့ပွီးပဲဖွဈဖွဈ Google ကနေ တနျးဝငျတာပဲဖွဈဖွဈ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ Google Keep ကတော့ ဖုနျးထဲမှာ (သို့) Chrome Browser မှာ Google Account Sign In ဝငျထားရုံနဲ့ တဈခါတညျး တနျးသုံးနိုငျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီနရောမှာလညျး အသာရတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
အခုဒီ Microsoft OneNote, Google Keep နဲ့ Evernote ကို ခွုံငုံသုံးသပျရမယျဆိုရငျ Microsoft OneNote ဟာ Mobile မှာသုံးတာထကျ ကှနျပြူတာမှာ အသုံးမြားသူတှအေတှကျ အကောငျးဆုံး Notes App လို့ သတျမှတျနိုငျပွီး အလားတူ Evernote ကလညျး PC Version ထကျ Mobile Notes App တှမှော အကောငျးဆုံးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ Google Keep ကတော့ Features စုံလငျဖို့ထကျ အံ့အားသငျ့ဖှယျ Sync လုပျနိုငျတဲ့ အမွနျနှုနျးကွောငျ့ သာမနျ Notes တှကေို ဖုနျးမှာရော၊ ကှနျပြူတာမှာရော အမွဲသုံးနရေတဲ့သူတှအေတှကျ အကောငျးဆုံး Notes App တဈခုလို့ သတျမှတျရငျးနဲ့ ဒီ Article ကို အဆုံးသတျလိုကျပါတယျ။